समाचार - भविष्यमा एलईडी प्रकाश उद्योग को तीन प्रवृत्ति
भविष्यमा एलईडी प्रकाश उद्योग को तीन प्रवृत्ति
घरेलु एलईडी उद्योगको समग्र शक्ति सुधार र सरकारी नीतिका अनुकूल प्रभावबाट प्रभावित, चीनको एलईडी उद्योगले हालका वर्षहरूमा गर्मी जारी राखेको छ, मात्रा र गुणस्तरको हिसाबले राम्रो प्रवृत्ति देखाउँदै। केही उद्योग संगठनहरूको अनुमान छ कि चीनको एलईडी प्रकाश बजारले २०१। र २०१ between बीचको २ annual. compound% को यौगिक वार्षिक वृद्धि दर हासिल गर्नेछ। उच्च वृद्धिको विकासको प्रवृत्तिसँगै चीन विश्वको सबैभन्दा सम्भावित एलईडी बत्ती बजारमा परिणत हुनेछ।
जे होस्, राम्रो स्थिति अगाडि छ, बजार प्रतिस्पर्धा पनि गहन छ। कसले चीनको साथ प्रतिस्पर्धा गर्न र एलईडी बजारमा गर्व गर्न सक्छ? परिणाम अझै अज्ञात छ। अग्रणी प्याकेजि enter उद्यमहरू र बत्तीहरू र प्रकाश उपकरणका धेरै उत्पादकहरूको साथ लगातार र गहिराई आदान-प्रदान पछि, कागजले भविष्यमा चीनको एलईडी बजारको तीन विकास प्रवृत्तिहरूको सार दिन्छ।
प्रचलन १: ब्रान्ड भिन्नताको लागि झगडा। कम टेक्नोलोजी सामग्री सहित उत्पादनहरू सँधै होमोजीनाइजेसनको "प्रकोप क्षेत्र" हुनेछन्। एलईडी मूल्य श्रृंखला प्रतिस्पर्धाको अपग्रेडिंगको साथ, अधिक र अधिक एलईडी निर्माताहरूले ब्रान्ड भिन्नताको महत्त्व महसुस गर्दछन्। एक अद्वितीय डिजाइन सिर्जना गर्न र यसको आफ्नै विशेष लाभहरू सिर्जना गर्न, अधिक र अधिक उत्पादकहरूले अप्टिकल ग्रेड सिलिकॉन लेन्सलाई हेरेका छन् जुन ईन्जेसन मोल्ड गर्न सकिन्छ।
प्रवृत्ति २: सरलीकृत टेक्नोलोजीको साथ उत्कृष्ट अप्टिकल क्वालिटी सिर्जना वास्तविकतामा परिणत हुनेछ आज, सामान्य प्रकाश अनुप्रयोगहरूको लागि एलईडी उपकरण निर्माताहरूले ठूलो समस्या सामना गरिरहेका छन: कसरी उत्पादन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने, जबकि उत्तम अप्टिकल गुणवत्ता प्रदान गर्ने? फ्लोरोसेंट पाउडर फिल्म टेक्नोलोजीको प्रगतिसँगै, एलईडी चिप लेभल प्याकेजिंग टेक्नोलोजीको नयाँ पुस्ता जुन एकै समयमा यी तीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्दछ अधिक र अधिक परिपक्व हुनेछ। भविष्यमा निर्माणकर्ताहरूले साहसका साथ आविष्कार गर्न सक्छन्, क्रान्तिकारी डिजाइन र उत्पादन मोडको साथ अवस्थित मोडलाई तोड्न सक्छन्, र निर्माणकर्ताहरू र प्रयोगकर्ताहरू बीच लागत र गुणस्तरको विन-विन अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछन्।
Trend 3: LED उपकरणहरूले थप प्रकाश दक्षता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नेछ। उच्च चमक एलईडी अनुप्रयोगहरूको लागि, उच्च-शक्ति प्रकाश-उत्सर्जक चिप्सले प्रकाशको दक्षता र उत्पादनहरूको स्थिरतामा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्दछ। तर अपग्रेडिंग चिप्सको लागत सस्तो छैन, जसले धेरै निर्माताहरूलाई फ्लिन्च गर्दछ। उच्च अपवर्तक अनुक्रमणिका सिलिकॉन राल प्याकेजिंग चिपकने को उपस्थिति प्रकाश लागत र स्थिरता सुधार गर्न अधिक लागत प्रतिस्पर्धी र सरल विकल्प प्रदान गर्दछ।